Hlola i-ESTA STATUS - ESTAmerica US ESTA E-Filing Services Traveling
Ihlola isimo sakho se-ESTA?
Ulwazi olulandelayo luyadingeka ukuthola uhlelo lwakho lokusebenza. Uma wazi inombolo yakho yesicelo, sicela ugcwalise i-E-File ngezansi. Uma UNGAZAZI inombolo yakho yesicelo, Sicela u-E-File Isicelo Esisha.
HLELA ISITATIMENDE SOKUFAKA
Zonke izinkambu ziyadingeka.
Ingabe Ufaka Isicelo lapha ESTAmerica.org?*
I-Receip Emailised nge Isikhathi sokukhokha
Uma ufake isicelo nge-ESTAmerica.org le nsizakalo mahhala! Sicela ubuyele futhi wengeze inombolo yakho yeresidi.
Inombolo yekhadi Inyanga010203040506070809101112 Unyaka20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038 Usuku lokuphelelwa isikhathi Ikhodi yokuphepha Igama lomnikazi weKhadi
Ngokuvamile uzothola igunya lakho lokuhamba nge-ESTA kungakapheli amahora ambalwa. Noma kunjalo, ukubuyekezwa, nokucubungula isicelo kungathatha isikhathi eside. Kulolu cala, ungalindela i-imeyili igunya lakho lokugunyazwa kokuhamba ngaphakathi okungenani Amahora we-72. Sicela usinike isikhathi sokubuyekeza nokucubungula uhlelo lwakho lokusebenza. Uma sithola inkinga ngesicelo sakho se-ESTA Travel Visa Passport, Sizolinga ukukufinyelela kwinombolo yefoni, ne-imeyli kulesi sicelo.
Uma unomuzwa wokuthi wena unikeza ulwazi olungalungile noma udinga ukuvuselela ulwazi lwakho ku-ESTA Travel Visa Passport Application, ungahlala u-E-File futhi noma uxhumane nathi. Silapha i-24 / 7.
Yini okufanele ngiyenze uma ulwazi lwami lwepasipoti lushintshile noma luphelelwe yisikhathi?
Thola ipasipoti entsha noma kukhona ushintsho kolwazi lwakho lokupasipoti, kumele ufake isicelo sokugunyazwa kokuhamba kwe-ESTA Visa Passport. Bheka Yimuphi ulwazi engingawubuyekeza? ukuze uthole uhlu oluthe xaxa lwolwazi olungashintshwa emva kokuthunyelwa kwesicelo sakho.
Ngiyiphi imininingwane engingayenza ku-ESTA?
Ngaphambi kokuhambisa uhlelo lokusebenza lokugunyazwa kwe-Electronic Travel Authorization (i-ETA) ngolwazi lokukhokha oludingekayo, ungabuyekeza zonke izinkambu zedatha yesicelo ngaphandle kwenombolo yepasipoti kanye nezwe lokukhishwa kwepasipoti. Uma isicelo sesivunyelwe, usengakwazi ukuvuselela noma iyiphi yalezi zinkambu ezilandelayo:
Kuthiwani uma kukhona iphutha kuhlelo lwami lwe-ESTA?
I-ESTAmerica.org izovumela abafakizicelo ukuba babuyekeze futhi baqondise idatha yabo ngaphambi kokuhambisa isicelo, kufaka phakathi ukuqinisekisa kabusha inombolo yepasipoti. Ngaphambi kokuhambisa isicelo ngolwazi lokukhokha oludingekayo, ungalungisa yonke imininingo yedatha yesicelo ngaphandle kwenombolo yepasipoti kanye nezwe lokukhishwa kwepasipoti. Uma umfakisicelo enza iphutha epasipoti yawo noma ulwazi lomuntu siqu ozodinga ukuhambisa isicelo esisha. Imali ehambisanayo izokhokhiswa isicelo ngasinye esisha esihanjisiwe.